Madaxweynaha Iran Xasan Ruuxaani oo digniin adag usoo diray Imaaraatka Carabta | XORRIYA NEWS
Home Caalamka Madaxweynaha Iran Xasan Ruuxaani oo digniin adag usoo diray Imaaraatka Carabta
Madaxweynaha Iran Xasan Ruuxaani oo digniin adag usoo diray Imaaraatka Carabta
Madaxweynaha Iiraan Hassan Ruuxaani ayaa ku tilmaamay heshiiska caadiga ahaa ee u dhexeeyay Imaaraatka iyo Israel inuu yahay khalad aad u weyn kaasoo ka dhacay dowladaha Khaliijka, isagoona caddeeyay rajada Tehraan taasoo ah in Abu Dhabi ka tanaasuli doonto go’aankan.
Rouhani wuxuu carabka ku adkeeyay khudbad uu telefishanku ka jeedinayay maanta (Sabti) in heshiiska lagu dhawaaqay Khamiistii uu yahay “khiyaano lagu sameeyay Falastiin, Carabta, Muslimiinta iyo Qudus” taasoo lagu taageerayo guushii Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee doorashadii madaxtinimada ee soo socota.
Madaxweynaha Iiraan ayaa ka digay in Imaaraadku qalad sameyn doono haddii uu rumeysan yahay inay arinkaas ka xoojin karto amnigeeda iyo dhaqaalaheedaba heshiiska ay la galayaan Mareykanka iyo Israel, isagoo caddeeyay sida uu u rumeysan yahay in heshiiskii caadiga ahaa uusan noqon doonin mid dani ugu jira amiirrada Imaaraatka iyo ammaankooda.
Intaas kadib Ruuxaani ayaa uga digay Imaaraatka iney ku dhaqaaqaan dhaqan galinta heshiiskaas hadii kale ayagana dhankooda xisaabta u badali doonaan.
Madaxweyne Ruuxaani ayaana si cad u sheegay in Iran ay gabi ahaanba badali doonto mowqifkooda UAE iyo qaabka ay ula dhaqmaanba hadii ay jidka u furto Israel, asigoona hadalkiisa kusoo gabo gabeeyay inuu rajeynaayo in Imaaraatka khaladkooda garowsadaan kana waantoobaan.